ကျမရဲ့နေရာလေး: ကျမတို့ ဒေသ ကအစားအစာတွေပေါ့..
ကျမတို့ ဒေသ ကအစားအစာတွေပေါ့..
ထိုဖူးနွေး..။ကျမတို့ ဆီကအသားမပါဘူး။ကုလားပဲနဲ့ လုပ်တာဟုတ်ဘူး။
ထိုအွန်လို့ ခေါ်တဲ့ စားတော်ပဲနဲ့ ပါ။
ခုနောက်ပိုင်း ကျိုင်းတုံမှာကုလားပဲနဲ့ လည်းလုပ်ရောင်းလာပြီတဲ့။
ခု..တရုတ်ကလာတဲ့ထိုဖူးနွေးလုပ်ဖို့ ရယ်ဒီမိတ်အမှုန့် ထုတ်တွေရောင်းတယ်တွေ့ တယ်။
ဘာတွပေါက်တတ်ကရထဲ့မှန်းကိုခန့် မှန်းလို့ မရဘူးလေ။
ဟင်းချက်ဖို့ လည်းဝယ်လာခဲ့တယ်။အိုစွမ်းသုတ်မယ်၊မုန်ညှင်းအချိုစောမယ်၊ပိန္နဲသီးဟင်းရည်နဲ့ ..။
သူ့ ထဲထဲ့ဖို့ မြေပဲထောင်းကလည်းအဆင်သင့်ထုတ်ပြီးရောင်းတယ်။
မုန်ညှင်းက အချိုစော လုပ်မယ်။
လွယ်လွန်းလို့ ပြောပြရမှာတောင် အားနာမိပါတယ်။
ရေမြုပ်နေအောင်ထဲ့။ပြီးမီးအေးအေးနဲ့ ၂နာရီကြော်လောက်ထိတည် ထားလိုက်။
အိပြီး ..ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေး။ကျန်တဲ့ဟင်းကစပ်စပ်နဲ့ ပိန္နဲသီးဟင်းရည်နဲ့ အားပါးပါး...။
တကယ်ဆိုရင် ကျမက ဒီအပေါ်ကပုံလို Aw lahm လာအိုအခေါ်
အဲဒီထဲမှာသစ်စလိုလိုတခု တွေ့ တယ်ဟုတ်လား။
အဲဒါက ငရုတ်သီး ပင်စည်အမြစ် ပေါ့။စပ်စပ်မွှေးမွှေးလေး။
အင်တာနက်မှာစားစရာလိုက်မွေရင်းနဲ့ လောဖက်ကအစားအစာမှာတွေ့ မိတာ။
သူတို့ က ကျွဲသားရေ(သားရေပွကြော်)နဲ့ ချက်တာ။
ကျမတို့ ကတော့ ၀က်ခေါက်နဲ့ ချက်တယ်။
ဘိုလိုတော့ chilli wood တဲ့။ဒီကနေ ပုံတွေယူပါတယ်။
မိုင်းလားဖက်ကအမျိုးတွေ လာပေးတဲ့ ရေညှိခြောက်ကြော်နဲ့ တူတဲ့အစာလည်းတွေ့ တယ်...။
နှမ်းစေ့တွေ ငရုတ်သီးတွေနဲ့ အခြောက်လုပ်ထားပြီးဆီနဲ့ ပြန်ကြော်တာ။
ကျမတို့ ဖက်ကပိုပြီး အစာများများထဲ့တယ်။
သူတို့ က နှမ်းတွေဘဲပိုများတာတွေ့ ရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျမရဲ့ ၂၀မ်းကွဲအမဈေးထဲမှာမုန်ညှင်းရောင်းတာတွေ့ လို့ အမှတ်တရရိုက်ထားတာ။
တူစိုက်ထားတဲ့မုန်ညှင်းချဉ်က်ိုကျမတို့ က တရုတ်ချဉ်လို့ ခေါ်တယ်။
အလယ်က အိုးကျတော့ ရှမ်းချဉ်ပေါ့။
သူ့ ကိုခေါက်ဖွန်းနဲ့ စားတယ်။နောက်ဆုံးအိုးက ကတက်ချဉ်ပေါ့။
အားလုံးသုတ်စားစား၊ကြော်စားစား စားလို့ ကောင်းကြတာပါဘဲ။
ကျမအမက နံမည်ကြီးအချဉ်သည်ကြီး၊နွေရာသီအလှုအတန်းတွေဆိုရင်သူ့ ဆီမှာဘဲအော်ဒါမှာကြတယ်။
သူတို့ လာအိုဖက်မှာလည်း ကျမတို့ လိုဘဲ သုပ်စားဟန်တူပါတယ်။
ကျမလည်း ခေါက်ဆိန့် တရက်ချက်စားဖြစ်ပါတယ်။
ကျမထုံးစံပေါ့..။ဆီလည်းနဲနဲနဲ့ ..။ရှမ်းမုန်ညှင်းချဉ်နဲ့ ။
တကယ့် ခေါက်ဆိန့် မှာမြေပဲဆံထောင်းမထဲ့ပါဘူး။
နှမ်းထောင်းနဲ့ ပါ။နှမ်းထောင်းကိုကြက်သွန်မိတ်နဲ့ တခါထဲရောနှယ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကဲ...နောက်မှ ကျမတို့ ဖက်ကအစားအစာအကြောင်းလေးတွေ အားလူးဆက်ဖုတ်ကြတာပေါ့နော်။
Posted by မီးမီးငယ် at 3:26 PM
jewel May 01, 2012 3:56 PM
မီးမီးငယ် May 02, 2012 1:45 PM
နောက်ကျရင် ရှမ်းစာတွေများများတင်ပေးရမယ်နဲ့ တူတယ်။
ချစ်စံအိမ် May 01, 2012 5:05 PM
မီးမီးငယ် May 02, 2012 1:46 PM
ဘေဘီ May 01, 2012 5:57 PM
ဘုရားရေ တကယ် ဘုရားစူး သရေယိုသွားတယ် အမး)
မီးမီးငယ် May 02, 2012 1:47 PM
မြတ်ကြည် May 01, 2012 9:29 PM
မီးမီးငယ် May 02, 2012 1:48 PM
မဒမ်ကိုး May 02, 2012 1:22 AM
မမမီးငယ်ရေ တို့ဖူးကလေ ဂျာရစ်လုပ်တာ ကုလားပဲနဲ့မို့လားမသိဘူး ရှမ်းတို့ဖူးမဖြစ်ဘူး .
တို့ဖူးကြော်စားချင်တယ် ရှမ်းတို့ဖူးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲ ပြောပြပါ တင်ပေး ဘလော့မှာ နော်နော် မြန်မြန်တင်နော် မကြာနဲ့း)))
မီးမီးငယ် May 02, 2012 1:52 PM
Kees Sprengers May 02, 2012 6:20 AM
Meemee, I am interested to see you quoted form our cookbook "Food from Northern Laos", and thank you for postingalink. But can you tell me in English script where you are based, what nationality? I cannot read the script on your website. My computer does register Thai script, so it is not Thai.
We are interested in all kinds of SE Asian food.
မီးမီးငယ် May 02, 2012 2:17 PM
First I want to tell you thanks you very much for your photo that I used.
I saw your website anciently,but I love very much.
And I saw my childhood dishes there,so I used in my post.
I should tell you,but I didn't have chance.
I belive you understand me.
I was born in KyingTong(KengTong)eastern Shan State,Myanmar(Burma).My grandpa from my mother side is original from Thailand.But we are not Thai.
We are ชาวไทเขิน.
I cannot see your email address in your website.
I can sent you more information of our people and our culture.
Aunty Oo May 02, 2012 10:55 AM
မီးမီးငယ် May 02, 2012 2:22 PM
သူတို့ က ဆားရည်တို့ အချဉ်ရည်တို့ နဲ့ စိမ်ရင်၊
ထိုဖူးကိုမကြိုခင် မွေထားတဲ့ ပဲနှစ်ကိုဆားနဲနဲပဲထည့်ပြီး။
မိုးငွေ့...... May 02, 2012 11:45 AM
အကုန်စားချင်တယ်ကွယ်... မီးမီးကိုကျေးဇူးတင်တယ် ဒီဟင်းတွေနဲ့ ဝေးကွာနေတာ နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပီလဲ...။ ဟိုတလောက တောင်ကြီးသွားတော့ ဈေးထဲမယ် ဆွယ်တော်ရွက်တွေ့လို့ဝယ်ခဲ့သေးတယ်...။ အိမ်မှာ ပဲပုပ်နဲ့အရည်လေးချက်စားကြတယ်...။
မီးမီးငယ် May 02, 2012 2:25 PM
စွယ်တော်ရွက်ကို ဗမာပြည်ဖက်မှာ ကဗျာဘဲစပ်တတ်ကြတယ်။
khin yamone May 02, 2012 12:01 PM
မီးမီးငယ် May 02, 2012 2:27 PM
Anonymous May 02, 2012 4:34 PM
အိုစွမ်းဆိုတာ အော်စွန့် ကိုပြောတာလားအမ? အမ ဟင်းတွေကိုကြည့်ပီး မစားရတာကြာပီမို့ ကီးဘုတ်ပေါ် သွားရည်တောက်တောက်ယိုတယ်ခွိ
မီးမီးငယ် May 03, 2012 2:51 PM
Anonymous May 02, 2012 10:36 PM
ဟင်..မနေ့ ကမန့် ထားတာလည်းပေါ်ဘူး။
ကဲ..ထပ်တင်မယ်ကွာ။ ဒီနေ့ တောင်သတိရနေတာကုိုယ်ကပိန္နဲသီးမရှိသေးလို့ ကြက်သားဟင်းကိုငါးပိချက်လိုချက်ပြီး ဆူးပုတ်အုပ်ထားတာ။ ဆီနဲနဲလေးနဲ့ အရမ်းကောင်းလို့ သတိရနေတာ။ ကိုယ်ကချစ်ချစ်ကြောင့်ဆီပြန်ဟင်းတွေချက်ဖြစ်ပေမဲ့ဆီတွေနဲ့ နယ်စားလေ့သိပ်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ရှမ်းဟင်းတွေကြိုက်တာ။
ခေါက်ဆိန့် ကိုနှမ်းနဲ့ ဆုိုကြိုက်မှာ။ ကုိုယ်ကမြေပဲတွေပါတဲ့ဟင်းတွေသိပ်မကြိုက်တတ်လို့ ။
မီးမီးငယ် May 03, 2012 2:55 PM
Anonymous May 02, 2012 10:42 PM
ဟင်မနေ့ ကမန့် ထားတာလည်းပေါ်ဘူး။
ဒီနေ့ တောင်သတိရနေတာ။ ပိန္နဲသီးမရှိသေးလို့ ကြက်သားကိုငါးပိချက်လိုချက်ပြီး ဆူးပုတ်အုပ်ထားတာ ဆီနဲနဲလေးနဲ့ အရမ်းစားလို့ ကောင်းလို့ သတိရနေတာ။ ကိုယ်ကချစ်ချစ်ကြောင့်ဆီပြန်ဟင်းတွေချက်ဖြစ်ပေမဲ့ ဆီတွေနဲ့ သိပ်နယ်စားလေ့မရှိဘူး။ အရည်ဟင်းဆုိုလည်းဆီတွေတအားဝေ့နေရင်ကြောက်တယ်။
မီးမီးငယ် May 03, 2012 2:57 PM
မစားတာက လျှာမှာရှတတ အရသာအထိအတွေ့ ရှိနေတယ်လို့ ။
san htun May 02, 2012 11:31 PM
အကုန်လုံး စားချင်တယ် မမီးရေ..
Kees Sprengers May 03, 2012 7:31 AM
Thanks for getting back to me. my email address is kees@galangalpress.com Dorothy's email is dorothy@galangalpress.com.
Dorothy learned about Burmese food many years ago, in early '70s, when she helpedaBurmese family in Wellington New Zealand set upaBurmese restaurant there. And I love the Burmese curries and other dishes she cooks.
A few years ago we bought an English language book called "A taste of Shan" by Page Bingham, and we'd like to find out more about Shan food.
We have so far never visited Burma, but are planning to visit end of this year or early next year (Next cool season). I am not certain if we will be able to visit Kengtung, that will depend on the political situation at that time.
You mention our website. have you actually seenacopy of our book? From the Wiki link you sent, I see Kengtung is quite close to Laos, so U understand that some of the food can be similar.
if you want to respond to us, maybe easier by email.
မီးမီးငယ် May 03, 2012 2:59 PM
I sent you email attached with my home town photo.
Qt May 05, 2012 10:18 AM
တမီးယေး မန့်ထားတာလဲ အရှိဝူး
ဒီတခါတော့ သရေကျပီးပဲ ကျန်တွားလယ်
ပဲ အကြောင်းပဲ ကောင်းကောင်း သိလယ်
ရှမ်းစာတွေ ဆို အကုန်ကြိုက်လယ်
တခုခု ပို့ပေး ဒါပဲ
အိတ်အခွန်ပို့ပေးလဲ ဖျစ်လယ် :D :D
မီးမီးငယ် May 06, 2012 4:08 PM
ဒီတခါအပြန် British Airway ကြီးနဲ့ ၊
အဲ..ရှမ်းဆေး ယာကဲ့ ဆိုတာဗိုက်နှာဗိုက်အောင့်ပျောက်တဲ့ဆေးဘဲ၊
ဟီး..ဟိုကမုန့် တွေပို့ ပေးပါအုံး..။